R/wasaare Kheyre oo Ankara kula kulmay dhigiisa Turkiga – XAMAR POST
R/wasaare Kheyre oo Ankara kula kulmay dhigiisa Turkiga
Mudane Xasan Cali khayre iyo dhigiisa Turkiga ayaa si wadajir ah Salaan Sharaf ugu qaatay Cutubyo ka tirsan Ciidanka Turkiga, waxaana loo tumay astaanta Qaranka Labada Dowladood.
Intaasi ka dib Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo Ra’iisal Wasaraaha Turkiga Ben Ali Yildirim ayaa kulan saacado qaatay wada yeeshay, waxayna si qoto dheer uga wada hadleen Xiriirka labada dal iyo sida lagu xoojin doono.
Sidoo kale waxaa la filayaa in kulan labaad ay isugu yimaadaan Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo dhigiisa Turkiga Ben Ali Yildirim, kaas oo oo ah kulan qado sharaf oo loo sameeyay wafdiga uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Qado sharafta kadib ayaa Wafdiga Ra’iisal wasaare Kheyre iyo madaxda Turkiga waxay so qoto dheer uga wada hadli doonaan xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya Labada dal iyo sidii Dowladda Turkiga u kordhin lahayd taageerada ay siiso Soomaaliya iyo sidoo kale iney iska xog wareystaan horumarka Goboleed iyo kan caalamiga ahba.
Dhanka kale, Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa booqan doona dadkii ku dhaawacmay Qaraxii Soobe ee dhawaan loo qaaday dalka Turkiga.